HomeAfaan OromooDargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa mana hidhaa duraan turan Sabbataa Daalattii keessaa gara hin beekamnetti dabarfaman.
Hidhamtootni Siyaasaa Oromoo Dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa mana hidhaa duraan turan Sabbataa Daalattii keessaa gara hin beekamnetti dabarfaman.
Dargaggoo lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa manni murtii irra deddeebiin akka lakkifaman ajajus poolisiin ajaja mana murtii kabajuu diduu fi olaantummaa seeraa tuffachuun hidhee dararaa kan jiru yoo tahu dargaggootni kunneen lamaan Guraandhala 6/2021 irraa qabanii mana hidhaa magaalaa Sabbataa Daalattii jiran irraa baafamanii gara mana hidhaa hin beekamnetti dabarfamuu maatiin hidhamtoota SBOtti himan.
Dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa Mana Hidhaa Mootummaa Itoophiyaa Keessatti – 2021
Akka maddeen keenya nuuf himanitti hidhamtoota siyaasaa kana gaafachuuf yeroo gara mana hidhaa Daalattii magaalaa Sabbataatti argaman gaafachuuf achi gahanii mana hidhaa sana seenanii gaafachuuf jedhan poolisiin balbala irra jiru Dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa akka baafamanii gara mana hidhaa hin beekamneetti fudhatamuu nuuf himanii jechuun SBOtti himaniiru.
Dargaggootni lameen kunneen baatii 7 oliif manneen hidhaa gara garaatti daddabarfamaa kan dararamaa jiran yoo tahu manni murtii akka isaan lakkifamaniif irra deddeebiin ajaja kunnus poolisiin olaantummaa seeraa kabajuu diduun hidhee jira.
Yeroo ammaa kanas dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa maaliif mana hidhaa Daalattii kan magaalaa Sabbataa jiru irraa gara mana hidhaa ammaaf hin beekamnetti akka dabarfamanis hanga ammaatti wanti beekame hin jiru.